‘मेरो छोरालाई गो’ली हा’न्‍ने अधिकार कसले दियो ?’ ६४ वर्षीय वृद्ध अम्बिका – Dainik Sangalo
‘मेरो छोरालाई गो’ली हा’न्‍ने अधिकार कसले दियो ?’ ६४ वर्षीय वृद्ध अम्बिका
November 28, 2020 485
बर्दिबास: प्रहरीको गो,लीले ६४ वर्षीय वृद्ध अम्बिका न्यौपानेको छोरा, सञ्जय न्यौपाने खोस्यो । पतीको मृ,त्युले गंगा न्यौपानेको सिउँदो पुच्छियो । उनका तीन सन्तान टु’हुरो भए। अन्याय वि’रुद्ध बोल्ने महोत्तरीको बर्दिबास-१ का ४२ वर्षीय सञ्जय न्यौपाने अब रहेनन् । उनको मृ,त्युले गाउँ शो’कमा डुबेको छ । गाउँलेहरुले प्रहरी वि’रुद्ध तीनसम्म राजमार्ग ब’न्द गराएर प्रदर्शन गरे । ***यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
बालिका गुलाब्सा खातुनको ह,त्याको वि’रोधमा महोत्तरीको बर्दि बासमा सञ्जय प्र’दर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रहरीले प्रहार गरेको गो,ली लागेर उनको ज्या’न गयो । ‘प्रहरीले संजय लाई तोकेरै पछाडिबाट ती’घ्रामा गो,ली हान्यो,’सञ्जयकी आमा अम्बिकाले भनिन्, ‘पुलिसलाई गो,ली हा’न्ने आदेश कसले दियो, कुन प्रहरीले चलायो । दुवैलाई का’रबाही हुनैपर्छ ।’
छोरोको मृ,त्युले अम्बिका मर्मा हत भएकी छन् । परिवार गहिरो शो,कमा डु,बेको छ । सञ्जय घरमै किराना पसल संचालन गर्दै आएका थिए । महोत्तरीको बर्दिबास–१४ शुभम् बस्तीकी बालिका गुलाब्सा खातुनको ह,त्या भएको थियो । त्यही घ’टनाले तनाब बढ्यो । गाउँबाटै अ’पहर णमा परेकी बालिको श,व ३५ घण्टापछि झाडीमा भेटियो।
ह,त्या गरेर बोरामा गुलाब्सको श,व लुकाइएको थियो । उनको ब,लात्का रपछि ह,त्या भएको भन्दै सडकमा प्र’दर्शन सुरु भयो । बालिका गत आइतबार बे’पत्ता भएकी थिइन् । सोमबार मध्यरातमा उनको श,व फेला परेको थियो । बालिकाको ह,त्या आ’रोपमा महोत्तरीको गौशाला–५ का २६ वर्षीय अरुण साहलाई प्रहरी प’क्रेको छ । अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् , हामीले केहि दिन अगाडी लिएको घटनाको अहिले फलो अप रिपोर्ट तपाई माझ प्रस्तुत गर्दैछौ । उनीबारे फेरी केहि नया कुरा पत्ता लागिरहेको छ । काभ्रे स्थायी घर भएका अहिले भक्तपुर सूर्यबिनायक माथि दूधीकोट भन्ने ठाउमा बस्दै आएका यो परिबार अहिले निकै समस्यामा रहेको छ । करिब १८ बर्ष जति भईसक्यो उता ठाउमा बस्दै आएको यो परिबार, अहिले एकदमै ठूलो समस्या आएपछि मिडियामा हार गुहार गर्दै आएका छन आमाछोरीनै । पोम प्रसाद गौतमसंग बिहे गरेकी दान कुमारी गौतम अहिले बिचल्लीमा परेकी छिन । जब आफनै श्रीमान पोमले अर्की युवती उठाएर फरार भएपछि ।
औधी माया गर्ने आफनै बाबुलेनै यस्तो गरेपछि छोरीको अन्तरबार्तामै आशुले डुबेको थियो । बुवाको कुरा सुन्दा बितिकैनै छोरीको आखाबाट बलिन्द्र आँशु झरेको थियो । यो घटनाको बिस्तृत बुझदा पहिलेबाटनै उता युवतीसंग अ’नैति’क स’म्बन्ध भएको र एकचोटी त प्रहरीचौकीमा समेत पुराएको कुरा खुल्न आएको छ तर अहिलृ तिनै युवती नगद उठाएर फरार भएका छन यि श्रीमान, हेर्नुस छोरी र आमाको बिलौना तपाईले नि कहि कतै देखे सम्पर्क गराइदिनु होला ।
Prevपाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,भोलि मंसिर १४ गते आईतबार,यस्तो छ तपाईको राशिफल !
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, मंसिर १४ गते आईतबार, आज तपाईको राशिफल हेर्नुहोस
बिहे गरेको हप्तादिन नबित्दै छोरीलाई काखी च्यापेर किन माइत गइन स्मिता ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
दु:खद खबर मलेसियामा Top glove कम्पनीमा कार्यरत चौधरीको मृ’त्यु
प्रहरीलाई धन्यवाद ! एक महिना अघि हराएका ११ वर्षका बालकलाई फेलापारी परिवारको जिम्मा लगाए
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (70182)